मा कम्प्यूटर Windows डाउनलोड फेसटाइम & यसको प्रयोग गर
Download FaceTime For Window PC, म्याक, Chromebook and iPad
मा कम्प्यूटर Windows डाउनलोड फेसटाइम & यसको प्रयोग गर | पूरा गाइड
डिसेम्बर 21, 2019 द्वारा Facetime Guide LeaveaComment
यस लेखमा, म बिट डाउनलोड विधि द्वारा बिट मार्फत हाम्रो ग्राहकहरु मार्गदर्शन हुनेछ पीसी लागि फेसटाइम. हामी पनि त्यसै गरी यस आवेदन आश्चर्यजनक विशेषताहरू एक ठहरनेवाला शामिल छन्.
को फेसटाइम अनुप्रयोग को coolest आवेदन भिडियोको लागि उपयोग को एक आफ्नो मित्र र परिवारका साथ कुराकानी छ. यो अनुप्रयोग द्वारा सिर्जना गरिएको छ स्याउ संगठन विशेष यसको कारण अनुरोध विस्तार गर्ने APK फाइल को तथापि ग्राहकहरु विन्डोज र म्याक पीसी मा उपयोग गर्न सकिन्छ. हामी उपयोग गर्न सक्छन् को Windows मा पीसी लागि फेसटाइम एक Android emulator को सहायता संग संचालन प्रणाली.
बंद मौका मा तपाईं यो अनुप्रयोगको बारेमा पत्ता लगाउन आवश्यक छ कि, लेख प्रक्रिया र यसको बारेमा झन् छानबीन कि बिन्दुमा. यो सबै भन्दा राम्रो तरिका मा प्रत्यक्ष अग्रिम सरल छ पीसी अनुप्रयोगको लागि डाउनलोड फेसटाइम.
1 पीसी Windows को लागि फेसटाइम को सुविधाहरू
2 कसरी डाउनलोड र Windows कम्प्यूटर मा फेसटाइम स्थापना गर्न
2.1 पीसी APK को लागि फेसटाइम डाउनलोड
3 कम्प्यूटर Windows मा फेसटाइम प्रयोग कसरी
पीसी Windows को लागि फेसटाइम को सुविधाहरू
पीसी डाउनलोड लागि फेसटाइम कुनै पनि ग्राहकको लागि प्रयोग गर्न लागत मुक्त र सुरक्षित छ.
फेसटाइम एक अधिकार आवेदन र विश्वभरिका कुनै पनि व्यक्तिगत यसलाई उपयोग गर्न सक्छन् छ.
ग्राहकहरु भिडियो कल ध्वनि कल फेसटाइम अनुप्रयोग उपयोग गरेझैं बनाउन सक्छ.
को भिजुअल HD गुणवत्ता को हो र लक्ष्य विशेष ग्याजेट भर पर्न.
ग्राहकहरु पीसी जस्तै विभिन्न ग्याजेटहरू सम्बद्ध गर्न सक्नुहुन्छ, Windows मा फेसटाइम, आईफोन, र कुनै मुद्दा संग म्याक.
यसबाहेक, ग्राहकहरु छिप्पू वा तिनीहरूले गर्न चाहनुहुन्छ घटनाको वर्ग विभिन्न कल.
अनुप्रयोग ग्राहकको ठेगाना पुस्तिका देखि आवेदन गर्न सम्पर्क हरेक एक समक्रमण र अन्य सबै फेसटाइम ग्राहकहरु गर्न सम्बद्ध हुनेछ.
ग्राहकहरु आफ्नो मनपरेको अतिथि थप्न सक्नुहुन्छ आफ्नो “शीर्ष विकल्प सूची” एप्लिकेसनमा.
पीसी लागि फेसटाइम मार्फत, ग्राहकहरु प्रभावकारी फोन कल गर्न सक्छन् र वरिपरि बोल्न सक्छन्9गर्न 10 व्यक्तिहरूलाई सबै गर्दा.
कसरी डाउनलोड र Windows कम्प्यूटर मा फेसटाइम स्थापना गर्न
PC मा फेसटाइम आफ्नो पीसी मा Bluestacks डाउनलोड पछि सम्भव छ.
तपाईं आधिकारिक साइटबाट Bluestacks आवेदन डाउनलोड गर्न सक्छन् bluestacks.com.
डाउनलोड Bluestacks पछि, यो स्थापना र डाउनलोड गरिसकेपछि एक पटक, आफ्नो पीसी पुनः सुरु.
यो Bluestack आवेदन सुरु गरेपछि सुरु गर्न केही मिनेट लिन्छ. नजिक बल छैन, यो सफ्टवेयर को भ्रष्टाचार हुन सक्छ.
एक पटक पीसी पुन: सुरु, तपाईंको सिस्टम मा खुला Bluestacks आवेदन.
मेनुमा जानुहोस् र प्ले स्टोर अनुप्रयोग क्लिक गर्नुहोस्.
प्ले स्टोर खोल्ने पछि, खोज मा क्लिक गर्नुहोस र फेसटाइम टाइप र त्यसपछि Windows पीसी लागि फेसटाइम डाउनलोड.
तुरुन्तै फेसटाइम स्थापना गर्न, खुला वा रन क्लिक, र त्यसपछि आफ्नो स्क्रिन निर्देशनहरू पालना. तपाईं प्रशासक पासवर्ड वा पुष्टि लागि संकेत गर्दै हुनुहुन्छ भने, पासवर्ड टाइप वा पुष्टि प्रदान.
को फेसटाइम स्थापना गर्ने, बचत क्लिक गर्नुहोस्, र त्यसपछि आफ्नो कम्प्युटरमा स्थापना फाइल डाउनलोड.
तपाईं फेसटाइम स्थापना गर्न तयार हुँदा, फाइल डबल-क्लिक गर्नुहोस्, र त्यसपछि आफ्नो स्क्रिन निर्देशनहरू पालना. तपाईं अगाडि बढ्न अघि तपाईँलाई भाइरस लागि स्थापना फाइल स्क्यान गर्न सक्छन् किनभने यो एक सुरक्षित विकल्प हो.
आफ्नो पीसी मा फेसटाइम सुरु.
पीसी APK को लागि फेसटाइम डाउनलोड
कम्प्यूटर Windows मा फेसटाइम प्रयोग कसरी
डाउनलोड र स्थापना पछि, को फेसटाइम अनुप्रयोग सुरु. तपाईं केवल आफ्नो फोल्डर मा क्लिक गरेर यो काम गर्न सक्नुहुन्छ.
जब तपाईं पहिलो पटक यो अनुप्रयोग सुरु, तपाईं आफ्नो इमेल आईडी र फोन नम्बर प्रविष्ट गर्नुपर्छ. यो सम्पर्क अन्य प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर आफ्नो परिचय बनाउन मद्दत गर्छ. तपाईं पहिले देखि नै एक आईडी छ भने, तपाईं यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अन्यथा तपाईंले केही सेकेन्ड भित्र एउटा नयाँ बनाउन सक्छ
लगइन प्रक्रिया पछि, तपाईं आफ्नो फेसटाइम अनुप्रयोगको बायाँ छेउमा नेभिगेसन प्यानल पाउनुहुनेछ. यो प्यानल कोसँग तपाईं जडान गर्न चाहनुहुन्छ सबै व्यक्ति को नाम को सूची समावेश.
व्यक्ति फेला बाहिर तपाईं चाहनुहुन्छ कुराकानी सुरु गर्न. एक पीसी मा फेसटाइम प्रयोग को मामला मा, तपाईं मात्र कुनै पनि व्यक्ति सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईं आफ्नो इमेल ठेगाना थाहा.
यो पछी, तपाईं डायल-अप सत्रको लागि प्रतीक्षा छ.
त्यसपछि अन्य प्रयोगकर्ता आफ्नो कल छनोट हुनेछ जब, तपाईं सबै भन्दा राम्रो गुणवत्ता भिडियो वा अडियो कल अनुभव गर्न सेट.
तपाईंको कुराकानी खत्म पछि, तपाईं बस कल रोक्न अन्त कल बटन क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ.
यो लेखको प्रक्रियाको बारेमा पूर्ण जानकारी समावेश जो पढ्न मा कम्प्यूटर Windows डाउनलोड फेसटाइम & यसको प्रयोग गर. डाउनलोड गर्न दिइएको रूपमा चरणहरू पालना PC को लागि फेसटाइम वा विन्डोज कम्प्युटर लागि फेसटाइम. पनि, फेसटाइम को सुविधा र फेसटाइम प्रयोग प्रक्रिया जाँच.
तपाईं तल उल्लेख टिप्पणी बक्स प्रयोग गरेर आफ्नो प्रश्नहरु यस लेखमा सम्बन्धित सोध्न मुक्त छन्. र हाम्रो वेबसाइट downloadfacetime.com थप उपयोगी जानकारी को लागि नियमित.
Filed Under: डाउनलोड फेसटाइम Tagged With: Facetime on Computer windows Download
संगीत को लागि एप्पल हेर्न तपाईंले प्रयोग फोन बिना
Windows को लागि फेसटाइम डाउनलोड
DOWNLOAD फेसटाइम लागि म्याक
फेसटाइम लागि आईप्याड
एन्ड्रोइडका लागि Skype
स्याउ कल वाच